Kulula kakhulu ukuthi ungavimba okuqukethwe kwabantu abadala ku-iPhone ne-iPad yezingane zakho | iPhone News
Kulula kanjalo ukuvimba okuqukethwe kwabantu abadala ku-iPhone ne-iPad yezingane zakho
UMiguel Hernandez | 19/05/2022 19:00 | iPhone, Okokufundisa namanyuwali, eziningana
Imishini ephathwayo, kungakhathaliseki ukuthi i-iPhone, i-iPad nanoma yiluphi olunye uhlobo, ingafinyeleleka kwabancane abasebancane nabasebancane. Ukujwayela kwabo ngokushesha kwalolu hlobo lwedivayisi kubasondeza enkathini yedijithali kusenesikhathi, ukufinyelela kuzo zonke izinhlobo zolwazi. Inkinga, kwesinye isikhathi, ukuthi okuqukethwe okuningi okungabukwa ku-inthanethi kugxile ngqo kubantu abadala, into eyenzeka nakumabonakude.
Kalula nje ungakwazi ukuvimba zonke izinhlobo zokuqukethwe kwabantu abadala njengamakhasi ewebhu, amamuvi nomculo ukuze uvimbele abancane ekufinyeleleni ngaphandle kokugadwa.
1 Isikhathi sesikrini, izilawuli zomzali ezihamba phambili ze-iOS ne-iPadOS
2 Usivula kanjani isikhathi sesikrini
3 Misa imikhawulo futhi uvimbele okuqukethwe kwabantu abadala
Isikhathi sesikrini, izilawuli zomzali ezihamba phambili ze-iOS ne-iPadOS
Sebenzisa isikhathi Kuyisici esikhulume ngaso izikhathi ezingenakubalwa futhi empeleni izici noma amakhono aso belokhu kukhula ngenguqulo entsha ngayinye ye-iOS. Kakhulu, ukuthi lapho uqala i-iPhone entsha, esinye sezinyathelo zokuqala mayelana nokucushwa yileso salokhu kusebenza, uma unquma ukuyivula, kunjalo.
Ngezizathu ezisobala, umuntu omdala ngeke adinge ukugadwa kokusetshenziswa kwe-iPhone noma i-iPad yakhe, kuncane kancane mayelana nokuvinjelwa kokuqukethwe okuthile, noma kunjalo, bayakwenza. Ingasisiza uma kuziwa ekwazini ngokujulile ukuthi siyisebenzisa kanjani futhi ikakhulukazi kangakanani i-iPhone yethu.
Yiba ngangokunokwenzeka, isikhathi sokusebenzisa iye yavela yaba yinto ebaluleke kakhulu futhi yengeza ekulawuleni kwabazali kwamadivayisi we-iOS kanye ne-macOS ngokuvamile, okwenza lo msebenzi ube lula kakhulu kubazali abafuna izingane zabo zixhumane nobuchwepheshe kusenesikhathi, bebeka imikhawulo ethile enikeza ukwengezwa kokuthula ekhaya.
Yingakho sifuna ukukukhombisa ukuthi kanjani sebenzisa ngendlela efanele isikhathi sokusebenzisa ukuze uvimbele noma uqaphe ukufinyelela okwenziwa encane yendlu kokuqukethwe i-inthanethi eyenza kutholakale kubo.
Ungasebenza kanjani isikhathi sokusebenzisa
Isinyathelo sokuqala, ngokusobala, ukwenza kusebenze lokhu kusebenza ukuze sikwazi ukwenza ngendlela oyifisayo amapharamitha awo futhi ngenxa yalokho senze izinguquko esizithandayo. Ngalokhu sizoya esicelweni izilungiselelo ye-iPhone noma i-iPad, futhi kwelinye lamakhasi okuqala esizowathola isikhathi sokusebenzisa. Uma singayitholi inketho, sikukhumbuza ukuthi lolu hlelo lokusebenza lunebha yokusesha phezulu, esingabhala kuyo isikhathi sokusebenzisa futhi sizoyithola ngokuphazima kweso.
Uma usungaphakathi, inketho iyavela vula "isikhathi sokusetshenziswa", lapho singathola khona umbiko wamasonto onke onolwazi ngesikhathi sokusetshenziswa futhi sichaze imikhawulo yezinhlelo zokusebenza esifuna ukuzilawula. Lezi yizinto eziyisisekelo zokusebenza ze isikhathi sokusebenzisa:
Imibiko yamasonto onke: Hlola umbiko wangeviki onedatha ngesikhathi sokusetshenziswa.
Isikhathi sokuphumula kanye nemikhawulo yokusetshenziswa kohlelo lokusebenza: Uzochaza isikhathi sokuba kude nesikrini futhi ungasetha imikhawulo yesikhathi yezigaba ofuna ukuzilawula.
Imikhawulo: Ungasetha imikhawulo ngokusekelwe kuzilungiselelo zokuqukethwe ezisobala, ukuthenga, ukulanda kanye, ngaphezu kwakho konke, ubumfihlo.
Ikhodi yesikhathi sokusebenzisa: Ungaphatha isikhathi sokusebenzisa ngqo kusuka ku-iPhone noma usebenzise ikhodi kudivayisi ukuze ugunyaze ukunyakaza okuthile.
Uma sesiyisebenzisile, izosibuza ukuthi i-iPhone ingeyethu, noma eyezingane zethu, uma sisungula lokhu njenge-iPhone yezingane zethu, sizokwazi ukulungisa izilawuli zabazali eziningi kunokuvamile. isenzo silandelwe Bazosicela ukucupha okuthile:
Misa umkhawulo wesikhathi wokusebenzisa esingawulungisa ngokushesha.
Setha umkhawulo wokusetshenziswa kohlelo lokusebenza nsuku zonke. Uma umkhawulo wokusetshenziswa wansuku zonke ufinyelelwa, uzocela ikhodi noma ukugunyazwa ukuze ukwazi ukuqhubeka nokusebenzisa idivayisi noma ukwelula isikhathi sokuyisebenzisa.
Khawulela okuqukethwe okuthile.
Misa imikhawulo futhi uvimbele okuqukethwe kwabantu abadala
Sesike saxoxa ngezinye izikhathi ukuthi singasungula kanjani imikhawulo yokusetshenziswa kwesikhashana kuzinhlelo zokusebenza ze-iOS, ngakho-ke namuhla sizogxila emikhawulweni yokufinyelela kanye nemikhawulo kuye ngohlobo lokuqukethwe, okungukuthi, vimba abantu abadala noma okuqukethwe okubekela sobala kule iPhone noma i-iPad.
Into yokuqala esizoyenza ukumisa imikhawulo ekufakweni kwezinhlelo zokusebenza, ngale ndlela, sizobavimbela ekufakeni izinhlelo zokusebenza ezithile ezibavumela ukuthi bafinyelele okuqukethwe kwabantu abadala noma okubekela sobala. Kulokhu sizolandela umzila olandelayo:
Ukuthengwa kwama-ITunes kanye nohlelo Lokusebenza
Phinda ukuthenga nokulanda ezitolo: Ungakuvumeli
Dinga igama-mfihlo: Dinga njalo
Manje sekuyisikhathi sokubeka imikhawulo kuhlobo lokuqukethwe olutholakala kule iPhone noma i-iPad, futhi nalokhu kuqondile kakhulu:
Lapha sinezinketho ezihlukahlukene esizozichaza ukuze unqume izilungiselelo zayo ngayinye:
Okuqukethwe kuvunyelwe ezitolo:
Umculo, iphodikasti nokudlalwa okokuqala: Singakhetha phakathi kokuqukethwe okufanele kuphela, noma futhi kube sobala
Iziqeshana zevidiyo: Vula noma uvale isibonisi sevidyo kliphu
Amaphrofayili omculo: Setha iphrofayili yomculo ehambisana neminyaka
Amafilimu: Singakhetha umkhawulo weminyaka yokukhethwa kwamamuvi esitolo
Izinhlelo ze-TV: Singakhetha umkhawulo weminyaka yokukhethwa kwamamuvi esitolo
Izincwadi: Singakhetha phakathi kwezincwadi ezifanele, noma ngokuqukethwe okusobala
Izinhlelo zokusebenza: Singakhetha umkhawulo weminyaka yokukhethwa kwamamuvi esitolo
Iziqeshana zohlelo lokusebenza: Vula noma uvale iziqeshana zohlelo lokusebenza
Ukufinyelela okungakhawulelwe: Sinikeza inkululeko ephelele yokufinyelela kuwebhu
Khawulela ukufinyelela kuwebhu yabantu abadala: Singavimba amawebhusayithi ahlonzwa njengawabantu abadala, futhi size sengeze amanye ukuze sihlale siwavumela, noma siwavimbe njalo
Okuqukethwe kokusesha iwebhu: Vumela noma vimba
Ulimi olubekela sobala: Vumela noma vimba
Futhi ekugcineni, uchungechunge lwemisebenzi ngaphakathi kwe-Game Center esizokuziba ngoba izoncika ohlotsheni ngalunye lomsebenzisi. Kulokhu, sincoma ukwandisa uhlobo lokuvinjelwa kokubili kokuqukethwe okuvunyelwe ezitolo, futhi kunjalo kokuqukethwe kwewebhu, ngale ndlela, ukufinyelela kuzokhawulelwa. Ukuze uthole ukuphepha okwengeziwe, sincoma inketho khawulela ukufinyelela kuwebhu yabantu abadala, engeza amawebhusayithi adume kakhulu kubhulokhi ngokwenza.
Futhi kulula kanjalo ukukhawulela ukufinyelela kwabancane ekhaya kokuqukethwe okuchazwa ngokuthi "okwabantu abadala" noma okubekwe obala emakhasini athile ewebhu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iPhone » eziningana » Kulula kanjalo ukuvimba okuqukethwe kwabantu abadala ku-iPhone ne-iPad yezingane zakho
I-Apple Yembula Izici Ezisha Ezintsha Zokufinyeleleka ze-iOS
Amahemuhemu mayelana ne-Apple Watch Series 8 ene-flat design return